Marcus Rashford Oo La Shaaciyey Muddada Uu Dhaawaca Kaga Maqnaanayo Garoomada | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMarcus Rashford Oo La Shaaciyey Muddada Uu Dhaawaca Kaga Maqnaanayo Garoomada
Marcus Rashford Oo La Shaaciyey Muddada Uu Dhaawaca Kaga Maqnaanayo Garoomada
Marcus Rashford ayaa dhaawac ku seegaya kulanka kooxdiisa Manchester United ay habeen dambe ku martigelinayso AC Milan lugta hore ee wareegga 16ka tartanka Europa League.
Laacibkan oo kuraanta dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii Manchester Derby ee ay 2-0 ku garaaceen Manchester City ayaa laga saaray garoonka kaddib markii uu laaday Riyad Mahrez.
Weeraryahanka reer England ayay degdeg ku noqotay ciyaarta AC Milan ee Khamiista, waanu maqnaanayaa sida uu xaqiijiyey tababare Ole Gunnar Solskjaer, laakiin waxa uu shaki ku jiraa inuu taam noqon karayo kulanka West Ham United ee Axadda soo socota.
Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay dhaawaca Rashford ayaa yidhi: “Ilama aha inuu ciyaarayo kulanka berri, walina tababarka kuma soo laabanin maantan. Waxay ila tahay inuu maqnaanayo ciyaarta berri, sidoo kalena shaki ayaa ku jira kulanka West Ham.”
Manchester United ayaa maanta magacowday xilal cusub, iyadoo agaasimahaha waaxda ciyaaraha uu noqday John Murtough iyo Darren Fletcher oo loo magacaabay agaasimaha, waxaana Solskjaer uu soo dhoweeyey xilalkan cusub ee la magacaabay.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aanu go’aadhnay go’aan oo aanu magacaabis samaynay. Waxaan aqaanay John illaa maalintii aan halkan imid, haddana waa kaalin rasmi ah. Wuxuu si fiican uga shaqayn jiray daaha dabadiisa, waana mid dhaqan ahaan kubboon.” Ayuu yidhi Solskjaer.
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa raaciyey: “Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa aanu haysano. Fikrado cusub ayuu soo kordhinayaa.”
Fletcher ayaa uu isagana ka hadlay, waxaanu yidhi: “Bilo yar ka hor markii aanu samaynaynay go’aanka ugu dambeeya, waxa jiray arrimo kale oo miiska u saarnaa Fletcher. Anigu waxaan hubay hal arrin oo ah in aanaan lumin karin Darren. Wuxuu la yimid fikrado cusub. Wuxuu leeyahay aragti caddaan ah oo ku saabsan kubadda cagta.”
DEG-DEG: Kooxdii Ugu Horreysay Ee Weyn Oo Si Buuxda U Shaacisay Go'aanka Ay Kaga Soo Horjeedo European Super League
Muxuu Ahaa Qoddobkii Sirta Ahaa Ee Ay Liverpool Ku Dartay Heshiiskii Ay Barcelona Kaga Iibisay Philippe Coutinho Saddex Sano Kahor?